၏အားသာချက်များကဘာတွေလဲ 304 သံမဏိပိုက်?
အရာအားလုံးတည်ရှိခြင်းသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အားသာချက်များရှိသည်, 304 သံမဏိပိုက်အဘယ်သူမျှမခြွင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်, သို့ဖြစ်လျှင်အဘယ်အကျိုးရှိသနည်း 304 သံမဏိပိုက်ရှိသည်? Wuxi Silver Coral Stainless Steel စက်ရုံကိုကြည့်ရအောင်. The 304 stainless steel tube is more resistant to rust than the 200 series stainless…
#stainless steel products Let me show you the main stainless steel products we have. ကျနော်တို့ ASTM A554 စံသံမဏိဂဟေစတုရန်းပိုက်ရှိသည်, စတုဂံပိုက်,နှင့်စတုရန်းပိုက်. ပြီးတော့ပိုက်လိုင်းတွေနဲ့အခြားအထူးအပိုင်းတွေလည်းရှိတယ်. ငါတို့သည်လည်း ASTM A270 စံသန့်ရှင်းသောပိုက်ထုတ်လုပ်သည်. https://www.linkedin.com/posts/jsy-sspipe_stainless-activity-6686552638252740608-n0q1/
ဇူလိုင်လအကုန်တွင်ကျင်းပသောအလီဘာဘာအွန်လိုင်းကုန်စည်ပြပွဲကိုကျွန်ုပ်တို့တက်ရောက်မည်. Follow our updates on https://jinsuiying.en.alibaba.com/?ppm = a2700.icbuShop.88.16.6f935860WP9JRw
123Next >...48 စာမျက်နှာ 1 ၏ 48
ကျနော်တို့ရဲ့အရည်အသွေးထုတ်ကုန်နှင့်အတူဖောက်သည်များကိုကြိုးစားကြသည်. သတင်းအချက်အလက်တောင်းဆိုခြင်း,Sample & Quote,ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ!